by ဂျက် Zavada
တဲတော်တိမ်တိုက်နှင့်မီးသတ် HID ညျဘုရားသခငျ၏ရောက်ရှိခြင်း၏မဏ္ဏိုင်
သူကအဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံနေရာကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ဘုရားသခငျသညျဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်မီးတစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်တိုင်ထင်ရှား။ , ထှကျမွောကျရာ 13: 21-22 အံ့ဖွယ်ဖော်ပြထားတယ်:
နေ့အချိန်၌မိုဃ်းတိမ်တိုင်မဟုတ်သလိုညဉ့်အခါမီးတိုင်မကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌နေရာမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ( ထို )
တော၌အမှတဆင့်လူတွေကိုဦးဆောင်၏လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်အပြင်, တိုင်လည်းသညျဘုရားသခငျ၏ကာကှယျနိုငျရှိနေခြင်းနှင့်အတူဟေဗြဲသက်သာခြင်း။ လူစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ ဧဒုံပင်လယ်ဖြတ်ကူး , မိုဃ်းတိမ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေအီဂျစ်စစ်တပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့မိုဃ်းတိမ်ပေမယ့်မှောင်မိုက်ကိုအဲဂုတ္တုလူတို့သည်ရန်ဟေဗြဲမှအလင်းကိုပေးတော်မူ၏။
ဘုရားသခငျသညျပထမဦးဆုံးအရှေးခယျြခဲ့သည့်အခါ မောရှေသည် ကျွန်ခံနေရာထဲကအစ်စရေးဦးဆောင်လမ်းပြရန်သူတစ်ဦးမှတဆင့်မောရှေအားမိန့် မီးလောင်ရာခြုံ ။ အဆိုပါမီးငွိမျးပေမယ့်ချုံကိုယ်တိုင်ကကိုလောင်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ဘုရားသခငျသညျသဲကန္တာရတောအရပ်မှတဆင့်ရှည်လျားခရီးဟေဗြဲအဘို့အကုန်ခမ်းတော့မှာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ သူတို့ဟာလိမ့်မယ် ကြောက်လန့် ခြင်းနှင့်သံသယနှင့်ပြည့်စုံ။ သူကသူတို့ကိုသူသူတို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ခဲ့သူတို့ကိုအာမခံဖို့မီးသည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်မှတ်တိုင်တိုင်ကိုပေး၏။
တချို့ကကမျြးစာကိုပညာရှင်များမိုဃ်းတိမ်တိုင်သည်ပြင်းထန်သောသဲကန္တာရနေရောင်ကနေလူတွေ shaded နှင့်လည်းခရီးသွားများအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏မွေးမြူရေးသက်သာစေတော်မူသောအစိုဓာတ်၏မျက်ရည်စက်လေးတွေပါရှိသော theorize ။
မိုဃ်းတိမ်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲပေါ်ဆင်း လာ. နှင့်သခင်၏ဘုန်းတော်ကိုဖြည့ ကန္တာရရာတဲတော် ။ (ထွက်မြောက်ရာ 40:34) ။ မိုဃ်းတိမ်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲဖုံးလွှမ်းသည့်အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကြွ၏။ မိုဃ်းတိမ်ကိုရုပ်သိမ်းသည့်အခါသူတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဘုရားသခငျသညျကွကုနျအံ့ဖို့မမောရှေအားသတိပေးခဲ့သည် အာရုန်သည် , ထို ယဇ်ပုရောဟိတ် သည်ဝင် ဌာန၏သန့်ရှင်းသောအ သူသေဆုံးလို့သူလိုချင်အခါတိုင်းရာတဲတော်၌တည်၏။ ဘုရားသခငျသညျပျေါမှာထငျရှား သေတ္တာအဖုံး , ဒါမှမဟုတ်၏အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအဖုံး သောပဋိညာဉ်တရား၏သေတ္တာကို မိုဃ်းတိမ်၌။
မီးတိုင်, အစ်စရေးလူမြိုးအတှကျလမျး illuminating ၏ကွိုတငျဖျောပွခဲ့ သညျယရှေုခရစျသ မှလာသောမေရှိယကို အပြစ်တရား၏လက်မှကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင် ။
ယရှေုသညျအတှကျလမျးပြင်ဆင်နေခုနှစ်တွင် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန် "ဟုပြောသည် ... ငါရေအားဖြင့်သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေး၏။ ငါလာကြလိမ့်မည်ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်သို့သော်တဦးတည်း, ထိုသူ၏ခြေနင်းငါကိုဇောင်းရန်မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကို၏ Thong ။ ထိုသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်မီးဖြင့်သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပါလိမ့်မယ်။ "( လုကာ 3:16, င်း)
မီးစင်ကြယ်သို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏ရှေ့တော်မှောက်ကိုပုံဆောငျနိုငျသညျ။ အလင်းကိုသန့်ရှင်းခြင်း, အမှန်တရားနှင့်နားလည်မှုကိုဆိုလိုတာပါ။
"ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ " "အကြင်သူသည်ငါ့ကိုအောက်ပါအတိုင်းသည်မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်။ " (ယေရှုဒီလိုပြောခဲ့တယ်) ( ယောဟနျသ 8:12, င်း)
အဆိုပါ တမန်တော်ယောဟန်က သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာတစ်စောင်၌ဤထပ်ခါတလဲလဲ: "ဒါကငါတို့သည်သူ့ကိုအထံ၌ကြားရနှငျ့သငျဖို့ကြေညာထားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုသည်: ။ ဘုရားသခငျသညျအလငျးကို၏, ထိုသူ၌မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမသည်မှောင်မိုက်လည်းမရှိ" (1 ယော 1: 5, င်း)
ယရှေုသညျယူဆောင်အလင်းကိုပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးရန်ဆက်လက် ခရစ်ယာန်တွေက မီးတိုင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပဲ့ထိန်းသကဲ့သို့, ယနေ့။
ခုနှစ်တွင် ဗြာ , သမ္မာကျမ်းစာ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်, ယောဟန်ခရစ်တော်ရဲ့အလငျး၌ထွန်းလင်းဘယ်လိုပြောထားသည် သည်မိုဃ်းကောင်းကင် : "မြို့နေရောင်မလိုအပ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေဘို့, ပေါ်မှာထွန်းလင်းရန်အလကအလင်းကိုပေးသည်နှင့်သိုးသငယ်သည်လည်းထိုမြို့၏ဆီမီးဖြစ်ပါသည် ။ " (ဗျာဒိတ် 21:23, င်း )
ထှကျမွောကျရာ 13: 21-22, 14:19, 14:24, 33: 9-10; တောလည်ရာ 12: 5, 14:14; တရားဟောရာ 31:15; နေဟမိ 9:12, 19; ဆာလံ 99:7။
(Sources: gotquestions.org, biblehub.com, biblestudy.org နိုင်ငံတကာစံသမ်မာကမျြးစွယ်စုံကျမ်း, ယာကုပ် Orr, ယေဘုယျအယ်ဒီတာ; Holman ပုံသမ်မာကမျြးအဘိဓါန်, Trent C. ဘတ္, ယေဘုယျအယ်ဒီတာ; The New Unger ရဲ့ကမျြးစာအစျအဘိဓါန်, RK Harrison, အယ်ဒီတာ, )
ဂျက် Zavada, About.com များအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစာရေးဆရာနှင့်ပံ့ပိုး, ဆိုရင် single များအတွက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏ website အိမ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ဘယ်တော့မှမ, ဂျက်ကသူသင်ယူသည့် Hard-အနိုင်ရသင်ခန်းစာများသည်အခြားခရစ်ယာန်ဆိုရင် single သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို၏အဓိပ္ပာယ်အောင်ကူညီစေခြင်းငှါခံစားရပါတယ်။ မိမိအဆောင်းပါးများနှင့် ebooks အကြီးအမျှော်လင့်ချက်နှင့်အားပေးမှုကိုဆက်ကပ်။ သူ့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစေရန်, သွားရောက်လည်ပတ် ဂျက်ရဲ့ဇီဝ 's Page ။
1876 ​​မှစ. 1912 မှ 13 ဒလိုင်းလားမား
Soka Gakkai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ: အတိတ်, လက်ရှိ, အနာဂတ်
Baba Siri ကို Chand အတ္ထုပ္ပတ္တိ
1989 - အာဖဂန်နစ္စတန်, 1979 ၏ဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှု
Lucrezia Borgia ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘယ်လိုထိပ်တန်း Pros အလေ့အကျင့်ရေကူးကန်ပါသလား
အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံးပွဲဦးထွက် Rap ဂီတအယ်လ်ဘမ်များ
အဆင့်မြင့် Skiers ဘို့နှင်းလျှောစီးသိကောင်းစရာများ
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Lorena Ochoa ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
နှင်းလျှောစီး Boot ကိုလက်အိတ်တကယ်အလုပ်လုပ်သလား?
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Anzio ၏တိုက်ပွဲ
တစ်ပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုပေါ်ကြယ် မှစ. သိကောင်းစရာများ
အိုင်အိုဒင်း Titration အားဖြင့်ဗီတာမင် C ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်
မိသားစုသမိုင်းစာအုပ်များအွန်လိုင်းများအတွက် 10 အလွသတင်းရပ်ကွက်များ
ဆက်ဆံရေးရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အမှားအကြောင်းထိပ်တန်း5စာအုပ်များ
စစ်ပွဲအပေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာ Views စာ
Trabajos con စရဖ oportunidades က de empleo en el gobierno ဖက်ဒရယ်က de ယူအက်စ်အေ
ပစိဖိတ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာအကြောင်း6အံ့သြစရာအချက်အလက်